आज चेन्नइ र दिल्ली भिड्दै,सन्दिपले खेल्न पाउलान ? – Khabar Art Nepal
आज चेन्नइ र दिल्ली भिड्दै,सन्दिपले खेल्न पाउलान ?
By Manish khatri	 On १८ बैशाख २०७६, बुधबार १३:३०
बैशाख १८एजेन्सी । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)मा महेन्द्र सिंह धोनी नेतृत्वको चेन्नइ सुपरकिंग्स र नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै छन ।दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपर किंग्ससंग उसैको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यी दुई टोलीबीचको खेल राति ८:१५ मा सुरु हुनेछ ।
चेन्नईस्थित चिदामबराम क्रिकेट स्टेडियममा दुवै टोली जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा रहने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छन् । दुवै टिमले समान १६ अंकका साथ प्लेअफमा स्थान बनाइसकेका छन् । आजको खेल जित्ने टिमलाई अंक तालिकामा शीर्ष २ मा स्थान बनाउने अवसर भएकोले दुवै टिमका लागि यो खेल निकै महत्वपूर्ण भएको हो ।
चेन्नईविरुद्ध दिल्लीले नेपाली लेग स्पिनर सन्दीपलाई मैदान उतार्ने सम्भावना रहेको छ । सन्दीपले यस सिजन ६ खेलमा ८ विकेट हात पारिसकेका छन् ।आजको खेल चेन्नइको चिदामबराम क्रिकेट स्टेडियममा हुँदैछ । यो मैदान स्पिनरको लागि सहयोगी पिच हो । त्यसैले आज दिल्लीले ३ जना स्पिनर (अमित मिश्रा, सन्दिप लामिछाने र अक्षर पटेल)लाई मैदानमा उतार्ने सम्भावना रहेको छ। दिल्लीविरुद्ध चेन्नईका कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी मैदान उत्रने सम्भावना अझै अन्योल रहेको छ । अस्वस्थ्यका कारण धोनी पछिल्लो खेलमा मैदान उत्रिएका थिएनन् ।
सुनसरीमा लागूऔषध सहित इटहरीका एक जना पक्राउ